Nkwalite na nkwalite nke usoro nkedo nchara nchara | Yingyi
Nkwalite na nkwalite nke usoro nkedo nchara nchara
Nkedo sheibụ iji ájá kpuchie dị ka akụrụngwa, ihe ebu na-ekpo ọkụ na okpomọkụ ụfọdụ, site n'ịgba égbè ájá, mkpuchi iji mee ka ájá siri ike, ịkpụzi, na-akpụ akpụ akpụ nke shei, elu na nke ala shei bonded ọnụ na ihe nkedo, na-akpụ oghere zuru oke maka ịkpụ ihe nkedo ịkpụzi. Ihe nkedo shei nwere njirimara nke obere itinye ego na akụrụngwa, nrụpụta nrụpụta dị elu, obere okirikiri, ọnụ ahịa nrụpụta dị ala, obere uzuzu na saịtị mmepụta, mkpọtụ dị ala, mmetọ dị ala na gburugburu ebe obibi, imecha elu elu nke nkedo, nha kwụsiri ike na arụmọrụ usoro, ma ejirila ya mee ihe n'ụgbọala, ọgba tum tum, igwe ihe owuwu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Site na iwebata usoro nkedo shei, a rụpụtala nrụpụta ihe nkedo shei kwụsiri ike na nke ọma. Otú ọ dị, a na-ahụ peel oroma na ájá nnyapade n'elu ihe nkedo dị oke njọ na mmepụta nkeihe nkedo ígwè, na ọdịdị elu adịghị mma. Oke peel oroma na ájá nnyapade n'ime ngwaahịa ndị nwere nkwarụ ruru 50%, nke na-ebelata ihicha nke ọma na ogo ngwaahịa nke nkedo.
1.1 Mkpebi dị mkpirikpi nke usoro mmepụta mbụ
Mmepụta nke akụkụ nke ngwaahịa igwe nkedo, na-eji shei ájá kpuchie usoro nkedo, otu ụdị nke abụọ iberibe, abụọ n'ígwé nke stacked igbe, na-eji okpukpu abụọ ọdụ reverse ájá agbapụ usoro shei.
1.2 Oke na ebe ntụpọ
A tụlere ọnọdụ na ọnụ ọgụgụ ntụpọ, na peel oroma na ntụpọ na-arapara n'ahụ pụtara ìhè karịsịa n'ọnụ ụzọ ime na elu elu nke nkedo ahụ.
2 ntụpọ na-akpata nyocha
2.1 Usoro nhazi ntụpọ
Peel oroma na-ezo aka na flake ma ọ bụ etuto a na-eme n'elu nkedo mgbe a na-agwakọta ígwè na ájá na-akpụzi n'elu ihe nkedo. Na nkedo, shei elu n'ihi na-aga n'ihu scouring nke elu okpomọkụ metal mmiri mmiri, n'ihi na shei elu ala ọdịda, daa ájá na a wụrụ awụ nchara ọnụ n'ime oghere na nkedo elu kpụrụ protruding scar, ya bụ guzobe nke oroma bee, scars na ndị ọzọ ntụpọ. , Ihe nkedo ígwè anaghị adịkarị na ngwaahịa igwe nkedo. Ịrapara ájá bụ ntụpọ n'elu nkedo ahụ. Ọ na-esiri ike iwepụ gritty burr ma ọ bụ ogige nke a na-emepụta site na ịkpụzi ájá na metal oxide na-arapara n'elu nkedo ahụ, na-eme ka ọkpụkpụ na-egbuke egbuke na-eme ka ọ dịkwuo elu, nke na-emekarị ka ọrụ nke nhichapụ nkedo na-abawanye, na-ebelata arụmọrụ njedebe ma na-emetụta ọdịdị nke ihe nkedo. ngwaahịa.
2.2 Ihe kpatara nyocha
Ejikọtara ya na usoro nhazi nke ájá nnyapade na peel oroma, enwere ike ikpebi na ihe kpatara ya bụ ájá nnyapade na peel oroma n'elu shei nkedo ígwè bụ ndị a:
(1) N'oge a na-agbapụta mmiri, okpomọkụ nke ígwè a wụrụ awụ dị elu, na nkedo nkedo n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá na-ekpo ọkụ ruo ogologo oge. N'ihi na shei ájá e kpuchiri ekpuchi dị mfe ịdaba ma na-ekpo ọkụ ruo ogologo oge, ájá ájá dị n'akụkụ a na-ekpo ọkụ, na ọdịda nke ájá dị n'elu oghere ahụ na-eme ka ihe na-eme ka ịrapagidesi ike na ájá na peel oroma n'elu. nke nkedo;
(2) Ngwunye na-agwọ ọrịa nke shea ájá dị gịrịgịrị ma ike nke shea ájá dị ala. Mgbe okpomọkụ na-awụpụ dị elu ma ọ bụ oge nkwụsị nke nchara a wụrụ awụ dị ogologo ma ike na-agbapụta dị ukwuu, elu nke ájá ájá dị mfe ịgbaji ma gbajie, na-eduga na "nbanye" nke ígwè a wụrụ awụ n'ime ime ájá. shei, ma ọ bụ ụmụ irighiri ájá gbajiri agbaji na nchara a wụrụ awụ na-agbakọta ọnụ iji mepụta ntụpọ nke ịrapara ájá;
(3) The refractoriness nke mkpuchi mkpuchi bụ ala. Mgbe nchara a wụrụ awụ na-abanye n'ime oghere ahụ, elu nke oghere nke ájá ájá amalitela ịdaba tupu e sie ike nke ígwè a wụrụ awụ, na-eduga na "nbanye" nke ígwè a wụrụ awụ n'ime ime nke ájá ájá, ma ọ bụ ájá gbajiri agbaji. irighiri ihe na-eji ígwè a wụrụ awụ mee ka ájá dị nhịahụ sie ike;
(4) The mmetụta ike nke sprue bụ nnukwu, na sprue akụkụ nke scouring oge bụ ndị kasị ogologo, sprue na-njikọ kpọmkwem na ọnụ ụzọ ámá ime, mgbe elu okpomọkụ wụrụ nchara na-agba ọsọ n'ime sprue ozugbo n'ime oghere, ruru. ka ọgba aghara eruba nke gbazee ígwè, na-eduga na mgbọrọgwụ nke ọnụ ụzọ ámá ájá shei elu ida, sere n'elu ájá na mmiri mmiri ígwè n'ime oghere.
3. Usoro nyocha nyocha na nyocha
3.1 Belata okpomọkụ na-agbapụta
Aja mkpuchi a na-eji maka nkedo ígwè bụ quartz refractory material. Okpomọkụ nkedo ahụ dị oke elu ma ọ bụ ikpo ọkụ mpaghara, nke dị mfe ịda, mgbawa, ịgbasa ájá na ihe ndị ọzọ, na-ebute aja na-arapara, bee oroma na ntụpọ nkedo ndị ọzọ. N'ime usoro mmepụta shei, iji belata ọnụ ahịa nrụpụta, usoro nkedo nke shei anaghị eji mkpuchi refractory eme ihe ozugbo emechara. A na-eji mpaghara dị nso n'ọnụ ụzọ nke ime nkedo dị ka ntinye mmiri. Igwe ọkụ nchara a wụrụ awụ dị elu, akụkụ nke shei ájá na-ekpokwa ọkụ ruo ogologo oge. N'elu shei ájá ahụ na-agbaji, nchara a wụrụ awụ na-ekpo ọkụ na-agakwa n'ihu na-awụ akpata oyi n'ahụ, na-ebute ájá na-egbuke egbuke na bee oroma. N'ihe gbasara adịghị emetụta àgwà ngwaahịa ahụ, a ga-ebelata okpomọkụ nke wụsara nke ọma, na nkedo ụdị shei bụ ihe nkedo oyi. Okpomọkụ nkedo ekwesịghị ịdị oke ala iji gbochie ikewapụ oyi. Ya mere, ibelata nkedo okpomọkụ nwere ike imeziwanye mma elu ruo n'ókè ụfọdụ, ma ọ nweghị ike dozie nsogbu nke bee oroma na ájá nnyapade n'elu.
3.2 Melite ọkpụrụkpụ oyi akwa siri ike nke shei aja
Ngwunye mkpuchi nke shei aja dị gịrịgịrị ma ike nke shei aja dị ala. Mgbe okpomọkụ na-agbapụta dị elu ma ọ bụ oge nkwụsị nke nchara a wụrụ awụ dị ogologo ma ike na-agbapụta dị ukwuu, elu nke ájá ájá dị mfe ịgbaji ma daa, na-eduga na "nbanye" nke ígwè a wụrụ awụ n'ime ime ụlọ nke ájá ájá, ma ọ bụ akụkụ ájá gbajiri agbaji na-eji ígwè a wụrụ awụ mee ka ájá na-agbaji agbaji na bee oroma. Oghere shei dị oke mkpa, ike nke shei aja na-ebelata, enwere ike imebi oke ọkụ na ịsacha ájá na usoro ịwụsa. N'ihi na akụkụ a na-emetụta kpọmkwem site na igwe gbazere, ike nke shea ájá ebe a na-emetụta kpọmkwem ọdịdị elu nke nkedo ahụ. N'ime usoro mmepụta ihe na-aga n'ihu, a na-eme ka ọkpụkpụ ahụ dị jụụ ngwa ngwa, na-eme ka ọhụụ nke ọgbọ ájá na shei ájá na-etobeghị. Ọ bụrụ na ala nke sprue ahụ dị oke oke, oge ọkpụkpụ ga-eduga n'ọkụ nke akụkụ ndị ọzọ nke shei ájá, na ike nke ájá ájá ga-ebelata. Mgbe njikarịcha ya gasịrị, a ga-eme ka shei ájá dị ike kpamkpam na mmepụta na-aga n'ihu na-enweghị ọgbọ ájá na akpụkpọ na ọkpụkpụ.
3.3 Melite refractoriness nke aja mkpuchi
Aja mkpuchi nwere obere refractoriness. Mgbe nchara a wụrụ awụ na-abanye n'ime oghere ahụ, elu nke oghere nke ájá ájá amalitela ịdaba tupu e sie ike nke ígwè a wụrụ awụ, na-eduga na "nbanye" nke ígwè a wụrụ awụ n'ime ime nke ájá ájá, ma ọ bụ ájá gbajiri agbaji na-esiwanye ike. jiri ígwè a wụrụ awụ mee ka ájá na-anyagide ya. Mgbe emezichara nhazi nke ájá mkpuchi, ntakịrị nkwenye nke obere ogbe gosiri na a kpochapụrụ ihe na-eme na peel oroma na nkedo n'elu, ma ihe aja na-egbuke egbuke ka dị, na enweghị ike idozi ntụpọ nke ájá nnyapade n'elu ngwaahịa ahụ kpamkpam.
3.4 Kwalite nhazi usoro gating
Usoro ịwụsa mmiri nwere mmetụta dị ukwuu n'inweta nkedo dị elu. N'oge a na-ejuputa ihe ebu, shei ájá dị n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá ahụ na-agbaji tupu oge eruo, na-eme ka ígwè a wụrụ awụ 'na-abanye' n'ime nchara ájá ma ọ bụ ájá gbajiri agbaji na-eji ígwè gbazere sie ike, si otú ahụ na-emepụta ntụpọ dị ka ájá nnyapade na peel oroma. nso ọnụ ụzọ ámá na nnukwu ụgbọ elu. Mbelata mmetụta ike nke nchara a wụrụ awụ n'elu shei ájá na ịba ụba ikike nke ịwụsa usoro nwekwara ike imeziwanye ihe nke ájá nnyapade na bee oroma n'elu ngwaahịa. A na-atụle usoro nkedo na-aga n'ihu ka ọ ga-anọchi usoro nkedo mbụ, nke na-eme ka nchara a wụrụ awụ na-abanye n'ime oghere ahụ kwụsie ike ma na-ebelata ike ịchafụ nke shea ebu ahụ. Ọdịdị nke spate na-anabata trapezoid dị larịị, nke nwere ike belata ihe mgbagwoju anya na-asọpụta nke ígwè mmiri na-ekpuchi ájá ájá. Ogologo ogologo nke sprue kwesịrị ịdị mkpụmkpụ dị ka o kwere mee iji belata ntụpọ dị ka iche iche oyi na ahịrị na-asọpụta n'ihi oyi nke ígwè gbazere.
Oge nzipu: Ọktoba 14-2021